यौन पर्यटन र वेश्यावृत्ति: कुन गन्तव्यहरू सुरक्षित छन्?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » यात्रा गन्तव्य अपडेट » यौन पर्यटन र वेश्यावृत्ति: कुन गन्तव्यहरू सुरक्षित छन्?
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • कोस्टा रिका ताजा खबर • डोमिनिकन गणतन्त्र ब्रेकिंग न्यूज • इन्डोनेशिया ब्रेकिंग न्यूज • जापान ब्रेकि News न्युज • नेदरल्याण्ड्स ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • सिंगापुर ब्रेकिंग न्यूज • स्पेन ताजा खबर • थाईल्याण्ड ब्रेकि News न्युज • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • युक्रेन ताजा खबर • विभिन्न समाचार • भेनेजुएला ब्रेकिंग न्यूज
नोभेम्बर 26, 2019
यौन पर्यटन - कामुक संग्रहालय
केही यात्रीहरूले विशेष गरी आफ्नो यौन इच्छा पूरा गर्न यात्रा गर्ने योजना बनाउँछन्। यसलाई एक यौन-रमाइलो छुट्टी कल, यदि तपाईं हुनेछ। तिनीहरू रमाईलोको सपना देख्छन् रातो बत्ती जिल्लाहरु र कामुक मालिश स्टुडियोहरूको लागि तत्पर छ।
त्यहाँ यथार्थमा केहि पनि गलत छैन जबसम्म यात्रीले यौनकर्मीहरूको मर्यादामा ध्यान दिँदछ। यौनकर्मीहरूको दृष्टिकोण उनीहरूलाई उचित सम्मान दिनुपर्दछ। र यात्रुहरूले मानव बेचबिखन वा यौन दुर्व्यवहारमा बच्चाहरू समावेश गर्ने गतिविधिहरूको कुनै प in्क्ति त्याग्नु पर्छ।
भनेको छ, कुन गन्तव्यहरू यौन पर्यटनमा भाग लिन सुरक्षित छन्? केहि देशहरूमा, सेक्स उद्योग कानून प्रवर्तन प्राधिकरणको सुरक्षाको मजा लिन्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै र विचार गर्नको लागि उत्तम यौन पर्यटन गन्तव्यहरूको खोजी गर्दै, यहाँ सूचीमा राख्नको लागि १० छन्:
थाईल्याण्डमा केहि शहरहरू छन् जहाँ यौन पर्यटन अप्रत्यक्ष रूपमा बढुवा गरिएको छ। ती शहरहरू पट्टाया र बैंकक रेड लाइट जिल्लाहरू जस्ता यौनकर्मीसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। वास्तवमा, बैंकक विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध यौन राजधानीको रूप मा ताज पहनाई गरिएको छ।
यौन पर्यटनको यसको कुख्यात प्रशस्तताको लागि साँचो भएकोले, यसलाई एक यौनकर्मी स्वर्ग भनिन्छ। त्यहाँ केटीहरू छन् जो यात्रुको ठूलो पैसाको लागि उनीहरूको सेवाहरू बार्टर गर्न इच्छुक छन्। यो यति सही छ कि बैंकको प्रत्येक वर्ग फुटमा यौनकर्मी छ भन्न सुरक्षित छ।
तर के यो कानूनी हो? वास्तवमा, होईन। राज्यको कानून द्वारा यौन पर्यटन वा वेश्यावृत्तिलाई अनुमति छैन। यद्यपि यो पुलिसको नियन्त्रणमा रहेको छ र राष्ट्रिय जीडीपीमा लाखौं डलर आम्दानी भएको कारण सरकारले सेक्स उद्योगमा आँखा चिम्लेर राखेको छ।
सिंगापुरमा यौनसम्बन्धी काम कानुनी जत्तिकै वैधानिक हुन सक्दछ र कानुनले यसलाई नियन्त्रणमा राख्छ, तर वेश्यावृत्ति सम्बन्धी नकारात्मक गतिविधिहरू पुलिसले छानबिनमा देखाउँछन्। यसको कारणले गर्दा, यौन सेवा र यसको भुक्तानहरू बन्द ढोका पछाडि गरिन्छ।
जबकि वेश्यावृत्ति कानूनी हुन सक्छ, दलाल र वेश्यालयहरू छैनन्। पुलिसलाई आँखा फर्काउन प्रयोग गरिएको छ - जुनसुकै देशको पनि लि industry्ग उद्योगमा यो सामान्य विषय हो जस्तो देखिन्छ - तर प्रसिद्ध सेक्स हाउसेसहरूले यस परिसरमा कुनै आपराधिक गतिविधि नभएको सुनिश्चित गर्न ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्छ।
सिंगापुर एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसले वेश्यावृत्तिलाई उनको आफ्नै अपार्टमेन्ट वा घरमा गेल्याlang्ग रोड, अर्चर्ड, डेकर रोड, र केong साईक रेड लाइट जिल्ला जस्ता प्रख्यात ठाउँमा स्वतन्त्रता दिन्छ। तिनीहरू पनि यो तिनीहरूले द्वारा लीज गरेको परिसरमा वा ग्राहकको होटेलमा गर्न सक्छन्।
वेश्याहरूले एसटीडीहरू पत्ता लगाउन मेडिकल चेकअप गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूसँग सर्टिफिकेट आफैं हुनुपर्दछ जुन उनीहरूले यौनजन्य रोगबाट स .्क्रमित रोगहरूको वाहक होइनन् भनेर भनेका छन्।
डोमिनिकन रिपब्लिक यौन पर्यटन मा एक विशाल हो, र हो, यो कानूनी छ र कानून प्रवर्तन को संरक्षण अन्तर्गत आउँछ। तर सिंगापुरजस्तै, कसैले पनि यौनकर्मीबाट वा तेस्रो पार्टी मार्फत पैसा कमाउनका लागि वेश्यालय चलाउन सक्दैन। यौनकर्मीले आफ्नो पैसा कमाउनुपर्दछ।
डीआरमा, यौनकर्मीहरू स्वतन्त्र श्रमिक हुन सक्छन् यदि उनीहरू त्यसो गर्न चाहन्छन्। र त्यहाँ अप्स्केल क्षेत्रहरूको रूपमा चिनिने क्षेत्रमा यौन भेन्डि business व्यवसायमा संलग्न हुने अवसर पनि छ।
युक्रेनमा किभ र ओडेसा यस देशका सब भन्दा राम्रा मनपराउने यौन पर्यटन शहरहरू भनेर चिनिन्छन्। यहाँ यौन पर्यटन वास्तवमै अवैध छ, तर कानून बाट हस्तक्षेप गर्ने धेरै संभावना छैन। यी २ शहरहरूमा स्ट्रिप क्लबहरू छन् र मसाज पार्लरहरू सबै ठाँउहरूमा फल्ने।
युक्रेनका यौन यात्रुहरूले किभ र ओडेसा भ्रमण गर्न नछुटाउनु भएको भन्ने तथ्य औंल्याउँदछन् जहाँ उनीहरूले युक्रेनियन महिला र पुरुषहरूको सहयोगमा उनीहरूको यौन इच्छा पूरा गर्न सक्दछन्।
जापानको लोकप्रिय रेड लाइट जिल्ला टोकियोको रोपपन्गीको सडक हो। तर यस देशमा यौन यात्रा को लागी एक पकड छ।
जापानले धेरै संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूको आनन्द लिइरहेको छ, जबकि महिला यौनकर्मीहरूले विदेशी पुरुषहरूलाई वास्तवमै मन पराउँदैनन्। जापानी महिलाहरु विश्वास गर्छन् कि विदेशी पुरुषहरु चाहानुभएको सेक्सको प्रकार असभ्य छ र उनीहरु लाई यो अवांछनीय छ।
सँगसँगै, तिनीहरू विदेशीहरूलाई शरीरको गन्ध मनपर्दैन र भाषाको अवरोधलाई ग्राहकको यौन चाहनालाई पूरा गर्न आफैंलाई संलग्न गराउन एक अवरोध फेला पार्दछ।
के तपाईंलाई थाहा छ कि कोस्टा रिकामा यात्रा गर्ने सबैमध्ये १० प्रतिशत यौनका लागि जाँदैछन्? कुन देशले यति लोकप्रिय बनाउँछ? के मूल्यहरू राम्रो छन्? के कामदारहरू त्यत्तिकै कुशल छन्?
हो, हुनसक्छ, तर प्राय: यो किनभने संयुक्त राज्य अमेरिका मा, वेश्यावृत्ति अवैध छ, र कोस्टा रिका धेरै टाढा छैन।
वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै अमेरिकी बाध्य आप्रवासीहरू लगभग 80० प्रतिशत कोस्टा रिकामा वेश्यावृत्तिमा संलग्न छन्।
भेनेजुएलामा महिलाहरूसँग अत्यन्त बहुमूल्य गुणहरू हुन्छन् जुन उनीहरूलाई पृथ्वीमा सुन्दरताको वास्तविक अवतारको सार दिन्छ। भेनेजुएला महिलाले मिस वर्ल्डको उपाधि प्राप्त गर्ने संख्याको साथ यो सत्य हो।
यहाँ, वेश्यावृत्ति कानूनी हो, र यौन काम एक आदर्श हो, विशेष गरी काराकसमा। यो शहर यौन यात्रीहरु लाई खुशी को लागी एस्कॉर्ट सेवाहरु संग Booms।
वेश्यालयहरु यहाँ उपस्थित छन् साथै कामुक मसाज पार्लर र सेक्स मालिश स्पा।
स्पेनका सबैले भन्न सक्ने यो छ - वाइन, बुल फायटिंग, र कानूनी वेश्यावृत्ति। स्पेनमा रेड लाइट जिल्लाहरू प्रशस्त र सक्रिय छन्।
र कुनै रातो बत्ती जिल्ला नभएको सहरमा पनि, एक यौन यात्रीले वेश्यालाई आफ्नो सेवाहरू केहि राम्रो नगदका लागि आपूर्ति गर्नलाई भेट्टाए।
इन्डोनेसियामा बाल यौन बेचबिखनको लागि खराब प्रतिष्ठा छ, त्यसैले यौन यात्रीहरूलाई उनीहरू यौन अनुभव कहाँ पाउँछन् त्यस बारेमा धेरै होशियार रहन सल्लाह दिइन्छ।
सायद इन्डोनेसियामा यौन पत्ता लगाउन सब भन्दा सुरक्षित तरीका भनेको इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु हो। त्यहाँ वेश्यावृत्ति र वेश्यावृत्तिको फिंगरहरू छन् जुन एक यौन यात्रीले सोशल मिडिया मार्फत पहुँच गर्न सक्दछ।
गिलि र बालीमा यहाँ यौन पर्यटन अनौपचारिक रूपमा बोलेको छ - यो अवैध हो - त्यसैले सतर्कताको सुझाव दिइन्छ।
अब एम्स्टर्डम आफ्नो रेड लाइट जिल्लाहरूको लागि धेरै प्रख्यात छ। यहाँ, वेश्यावृत्ति पूर्ण रूपमा कानूनी र सुरक्षित छ। तिनीहरूसँग रेड लाइट डिस्ट्रिक्टमा समर्पित तिनीहरूको वेबसाइटको अंश पनि छ।
एक वेश्यालयहरु पछिल्लो टहलेर र विन्डोज मा वेश्याहरु मा एक हेराइ गरेर पनि एक व्यक्ति विन्डो शपिंग जान सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ एक यौन संग्रहालयको उपस्थिति पनि छ जहाँ यौन यात्रीहरूले शारीरिक प्रेम सहित शारीरिक रमाइलोको बारेमा केहि नयाँ कुरा सिक्न सक्छन्।
वेश्यालय सेक्स यौन पर्यटन